सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग- प्रिन्ट संस्करण - कान्तिपुर समाचार
सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग
राज्यको सम्पत्ति भनेको हामी सबैको साझा सम्पत्ति हो, यसको सदुपयोग गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । तर यसको र्चौतर्फी दुरुपयोग भइरहेको छ ।
हरेक व्यक्तिले सोच्नुपर्छ, मेरो कर्तव्य के हो ? मैले के गर्न हुन्छ, के गर्न हँुदैन ? निर्वाचनको बेला सरकारी गाडी प्रचार–प्रसारका लागि प्रयोग गरेको समाचार आएको छ । यसरी समाचार आइरहँदा पनि सरकारको ध्यान त्यता जानसकेको छैन । मन्त्री पदबाट हटेको महिनौंसम्म गाडी फिर्ता गर्दैनन् । सांसद, मन्त्रीहरू यो जति लाजमर्दो के होला ? निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू गरिसक्दा दलका नेताले यसको पालना गरेका छैनन् । निर्वाचन आयोगले चुनावी खर्च कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर आचारसंहिता लागू गरेको हो ।
तर दलका नेताहरू सुन्नेवाला छैनन् । नेताहरू जति खर्च गरेर भए पनि निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न मरिहत्ते गरेर लागेका छन् । सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग गर्नमा बहालवाला मन्त्री, बिना विभागीय मन्त्री, सांसद लगायत अन्य सरकारी कर्मचारी छन् भन्ने समाचार आइरहँदा यसप्रति सरकारको ध्यान गएको छैन, नत निर्वाचन आयोगले नै केही गर्न सकेको छ ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे
प्रकाशित : मंसिर ४, २०७४ ०८:५२
यात्रुलाई कष्ट नदिऔं
मुग्लिङ–नारायणघाट राजमार्गमा गत आइतबारको दिन यात्रा गर्दा भोगेका र देखेको केही दृश्य :जम्मा ३६ कि.मि. सडक पार गर्न १२ घण्टाभन्दा बढी समय लागेको थियो ।
मुग्लिङ–नारायणघाट राजमार्गमा गत आइतबारको दिन यात्रा गर्दा भोगेका र देखेको केही दृश्य :
जम्मा ३६ कि.मि. सडक पार गर्न १२ घण्टाभन्दा बढी समय लागेको थियो । सडक र जामबारे जानकारी दिने कुनै सूचनापाटी, ट्राफिक पुलिस वा निर्माण कम्पनीको तर्फबाट कर्मचारी परिचाल गरिएको देखिएन । विपरीत दिशाबाट आएका गाडीले एउटा ट्रकको दायांँ पछाडि हेर्ने ऐना फुटाइदिएकामा त्यसको क्षतिपूर्ति रु. २५० नपाउन्जेल हलचल नगर्ने भनी ट्रक ड्राइभरले आधा घण्टाभन्दा बढी रोकी सडक जाम गरेको । प्रत्येक २/४ सय मिटरमा घन्टौं जाम भएको । तर १०/१२ वटा
आपत्कालीन र त्यत्तिकै संख्यामा सेतो नम्बर प्लेटका गाडीहरू अनि तिनलाई पछ्याउंँदै केही अन्य गाडी बेलाइनबाट कुदेको । लामो जाम हुंँदा कतिपय गाडीका चालक गहिरो निद्रामा पुगेको र अपर्झट गाडी चलाउँंदा दुर्घटना हुन सक्ने । शौचालय र बजार पनि ठाउंँ–ठाउंँमा नहुनाले विशेषगरी महिला तथा विदेशी यात्रुहरूले अति नै दुख:कष्ट भोग्नुपरेको अवस्था देखियो । दैनिक हजारौंले यात्रा गर्ने उक्त सडकको दुरवस्थाले यात्रुको दैनिक समय अनाहकमा नष्ट भइरहेको छ । यसतर्फ सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको ध्यान जाओस् ।
– पूर्णमान श्रेष्ठ
टेङ्गल टोल, काठमाडौं